शनिबारको राशीफल : कुन राशी हुने भाग्य कस्तो छ आज ? हेर्नुस्:: Artha Dabali
शनिबारको राशीफल : कुन राशी हुने भाग्य कस्तो छ आज ? हेर्नुस्
वि.सं. २०७६ श्रावण २५ गते शनिबार तदनुसार ई. सं. २०१९ अगस्ट १० तारिख,, श्रावण शुक्ल पक्ष दशमी तिथी दिउँसो ०१ः०८ बजेसम्म त्यसपछि एकादशी तिथी, जेष्ठा नक्षत्र , मध्यरात्रीपछि ०२ः२६ बजेसम्म त्यसपछि मूल नक्षत्र ।
चुनौती चिर्दै काम बनाउन सकिनेछ । आतिथ्यपूर्ण सम्मान पाइएला । अरुलाई प्रभावित पारेर काम बन्नेछ । व्यापार व्यवसायमा लाभ मिल्नेछ ।
प्रयास गरेमा धन, धर्म र भाग्यबल स्थापना गर्ने राम्रो मौका छ । जे गर्दा पनि मान्यजनको राय लिनु राम्रो हुनेछ । स्वास्थ्य सबल बन्दै जानेछ ।
सानातिना घरायासी काममा समय बित्नेछ । दीर्घकालिन योजना कार्यान्वयन गर्न वा दूरगामी प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नु राम्रो हुनेछ । मिहिनेत र परिश्रमका साथ गरिएको कामबाट लाभ हुनेछ ।
शत्रुहरू किनारा लाग्नेछन् । चिताएको कामले तीव्रता लिनेछ । राजनीतिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । जोश जाँगर र हिम्मत बढ्नेछ ।
स्वास्थ्यस्थिती र आर्थिक पक्ष बलियो छ । मायाप्रेम र प्रणयसम्बन्धका लागि समय राम्रो छ । शरिर हुलुको र मन फुङ्ग हुनेछ । जीवनसाथी वा विपरित लिङ्गी साथीबाट मन फुकाउन सकिनेछ । विशिष्ष्ट व्यक्तिबाट प्राप्त सल्लाहले कार्य सम्पादन हुनेछ ।
घरायासी काम, मनोरञ्जन र खानपानमा समय र धन खर्च हुने तर आम्दानीमा कमि हुनेछैन ।
विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन् । नजिकको मित्रसँग भेटघाट हुनेछ । पठनपाठनमा प्रगति हुनेछ । दिनको उत्तरार्धमा धन खर्च हुनेछ ।
आर्थिक र व्यवसायी समस्या समाधान हुनेछन् । तर्कविर्तक चिन्तन आदिका क्षेत्रमा लाभ हुनेछ । तपाईको विचारको सराहना गर्नेछन् । स्वास्थ्य सबल रहनेछ । दैनिक कामकाज सजिलै सम्पन्न हुनेछन् ।
आफन्त वा मित्रले अप्रत्याशित रुपमा सहयोग गर्नेछन् । प्रेमी÷प्रेमिका वा जीवनसाथीसँगको सम्बन्धमा देखिएको समस्या समते निदान हुनेछ । व्यापार व्यवसाय र साझेदारीबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । खानपान र मेजमानीको अनुकूलता छ । तर खानपानमा ध्यान दिनुहोला ।
जुक्ति तथा बुद्धिको प्रयोगले समस्या सुल्झाउन सकिनेछ । मनोरञ्जनमा सहभागीता भइएला । प्रशस्त धन आर्जन गर्ने अवसर पाउनुहुनेछ ।
विगतमा गरेको पश्रिमको प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । रोकिएका काम बन्ने योग छ । ज्ञागुनका क्षेत्रमा सक्रिय भइनेछ । व्यवसायिक क्षेत्रबाट राम्रो लाभ प्राप्त् हुनेछ स आम्दानीका मार्गहरु खुल्ला हुनेछन् ।
विशेष सभासमारोहमा सहभागी भइएला । सामाजिक मान प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्ने समय छ । पारिवारिक जीवन सन्तोषद्र रहेको छ ।
योजना कार्यान्यनमा ढिलाइ गर्नाले आफैंपछि परिनेछ । राजनैतिक कार्यमा बाधा आउनेछ । स म्पत्ति हराउने वा नष्ट होला । साँझमा पैशा खर्च हुने योगछ ।
झिनामसिना काममा खट्ने प्रेरणा प्रदान गर्नेछ । छिमेकी वा साथीभाइका क्रियाकलाप देखेर दिक्क लाग्नेछ । कुनै किसिमको झगडा वा विवादमा फस्नु राम्रो हुँदैन । प्रेमसम्बन्धका कारण निराशा हुनेछ ।
परदेशमा बस्नेहरुले आज घरायासी कुरा सम्झनेछन् । परिवारका खुशीका लागि खर्च गरिनेछ ।
भ्रमण खानपान तथा फेसनमा धन खर्च हुनेछ । गरेको काममा ढिलासुस्ती हुनेछ । महत्वपूर्ण अवसर गुम्न सक्नेछ । अरुको भर पर्दा धोका पाइनेछ ।
पराक्रम र प्रसिद्धी आर्जन गर्ने समय छ । अल्छी नगर्नुहोला । सामाजिक काममा नेतृत्वदायी भूमिका वहन गर्नुपर्नेछ ।
बोलीको प्रभावले काम बन्नेछ ।
चेलीबेटीको तर्फबाट खुशीको वातावरण तयार हुनेछ । लामो दुरीको लाभदायक यात्राको सम्भावना छ । सामाजिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन मन लाग्नेछ । दाजुभाइको सहयोग लिन वा दिन सकिन्छ ।
मनमा हर्ष, उमङ्ग र उत्साह छाउनेछ । विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग पाईनेछ । मन लोभ्याउने पहिरनले अरूको नजर आफूमाथि पार्नेछ ।
नयाँ काम हात लाग्ने समय भएकोले आफ्नो विचार कार्यान्वयन गर्दा राम्रो हुन्छ । सरुवा हुने वा स्थान परिवर्तन गर्ने धारणा आउनेछ । प्रशस्त धन आर्जन गर्ने अवसर पाउनुहुनेछ ।
प्रतियोगितात्मक क्रियाकलापमा सफलता पाइनेछ । सामाजिक र व्यक्तिगत प्रतिष्ठा कायम गर्ने राम्रो मौका छ । अध्ययनमा प्रगति हुनेछ । आत्मविश्वास बढ्नेछ । विशिष्ट व्यक्तिसँग भेटघाट हुनेछ । पारिवारिक जमघटमा मन रमाउनेछ । वस्त्र, अलंकार आदि खरिद गर्ने योग छ । नयाँ ठाउँमा प्रवेश वा लगानीको समय छ । नयाँ ठाउँको भ्रमण लाभदायी रहेको छ ।
धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् । नयाँ कार्यको थालनी हुनेछ । साथीभाइ र परिवारका सदस्याहरले सहयोग गर्नेछन् । व्यवसायिक क्षेत्र लाभप्रद रहनेछ ।
भौतिक साधनो जोहो हुनाका साथै मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा सक्रिय हुने अवसर जुट्नेछ । भाइबहिनी र सन्तानपक्षबाट सन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ ।
कूटनीतिक नियोगको सहयोग मिल्नेछ । वैदेशिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । व्यापारिक वा दैनिक कामहरु सन्तोषजनक रहेको छ । खानपिनका परिकार प्राप्त हुने र भ्रमण, पर्यटन, रमझम तथा सामाजिक काममा सहभागी हुनुपनेृछ । धार्मिक र सामाजिक काममा मन जानेछ । दानपुण्यका क्षेत्रमा लगानी हुनसक्छ ।
आजको प्रयत्न निष्फल जस्तै होला । अनावश्यक झमेलामा परिएला । चुनौतीको सामना गर्नुपर्ला । प्रयत्न गरे फाइदा लिन सकिनेछ ।
आर्थिक पक्ष सन्तुलनमा राख्न गाह्रो पनेृछ । सानातिना सामान हराउने वा चोरी हुने सम्भावना रहेको छ सचेत हुनुहोला । दानपुण्य र परोपकारका क्षेत्रमा काम गर्न मन लाग्नेछ । सार्वजनिक हित र परोपकार क्षेत्रमा गरेका लगानीको शुभ परिणाम प्राप्त हुनेछ ।
रोकिएको आर्थिक कारोबारले सामान्य गति लिनेछ । विदेश यात्राको काम शुरु गर्न समय अनुकूल रहेको छ । घरिघरि मन अशान्त बन्नसक्छ । सामान्य कुरामा नअल्झिनुहोला । नयाँ व्यवसायमा लगानी नगर्नु नै राम्रो हुन्छ ।
शुभ समाचार सुन्न पाइएला । नयाँ कार्यको थालनी होला । राजनैतिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । आम्दानी प्रशस्तै बढ्नेछ ।
आत्मबल बढ्ने समय छ ।
राज्यपक्षबाट हुनुपर्ने काममा सफलता मिल्नेछ । अध्ययन वा प्राज्ञिक क्षेत्रमा लाभ मिल्ने देखिन्छ । अभिभावकको आशिर्वाद प्राप्त हुनेछ । सन्तान र भाइबहिनीले समेत सहयोग गर्ने देखिन्छ ।
नाम, दाम र प्रतिष्ठाका लागि प्रयास गरिनेछ । सुखसुविधा र विलासिताका लागि समय र धनको जोहो हुनसक्छ । व्यापार व्यवसाय र रोजगारीका क्षेत्रमा फाइदा लिन सकिनेछ । धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सभासमारोहमा सरिक हुने र लाभ लिन सकिने समय छ ।
मेहनतीहरूका लागि दिन फलदायी रहनेछ । आफन्त र साथीभाइबाट सहयोग तथा हौसला प्राप्त हुनेछ । मुद्दा–मामिलामा विजयी भइनेछ ।
पितृपक्षका विषयमा घोत्लिन मन लाग्नेछ । हाकिम वा अभिभावकका विचारले प्रभावित तुल्याउन सक्छ । सन्तानपक्षबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ ।
सामाजिक क्षेत्र रनोकरीबाट मान सम्मान मिल्नेछ । कर्मक्षेत्रमा मिहिनेतका साथमा खट्ने समय छ । आम्दानीको बाटो सहज छ । व्यापार व्यवसाय र कारोबारबाट राम्रो प्रतिफल आउनेछ । रोकिएको सरकारी काम सुल्झाउने समय छ । स्वास्थ्य सबल छ ।
आँटेको र ताकेको कार्य पुरा होला । सामाजिक सभासमारोहमा भाग लिनु पर्नेछ । साहित्यिक क्षेत्रमा रुची बढ्नेछ । नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ ।
भाग्य निर्माणको समय हो । असहाय र वृद्धवृद्धालाई सहयोग गर्नाले भाग्यबल बढ्नेछ । पुराना साथीभाइसँग भेटघाट हुने आकस्मिक लाभ मिल्ने समय छ । सामूहिक नेतृत्व सम्हाल्ने मौका छ । व्यापार व्यवसायमा लाभ मिल्नेछ । नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने समय छ ।
मान्यजनको आशिर्वाद प्राप्त होला । ठूलाबडाको सहयोगले महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुनेछ । परोपकारी समय हो । प्रेम र भाइचारा जीवन्त तुल्याउने अवसर प्राप्त हुनेछ । परीक्षा वा प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनुहुँदैछ भने अभिभावको आशिर्वाद लिनुहोला ।